रमाइलो भान्सा रमाइली सुगारिका | SouryaOnline
रमाइलो भान्सा रमाइली सुगारिका
सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख १२ गते २:४७ मा प्रकाशित
पूर्वनेपालसुन्दरी सुगरिका केसीको सार्वजनिक सक्रियता परिचय गराइरहनुपर्ने विषय होइन । थुप्रै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सञ्चालिकाका रूपमा प्रस्तुत भइरहने उनी विभिन्न संस्थामा आबद्ध छिन् । अहिले एक्सन डेभलपमेन्ट सेन्टरको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा खटिरहेकी उनी आफ्नो घरभित्रचाहिँ कत्तिको खट्दी हुन् त ? त्यसमाथि पनि घरको भान्सामा कत्तिको चल्छ उनको सीप ? उनैले भनिन्– ‘मलाई भान्सामा काम गर्न रमाइलो लाग्छ ।’ बिहान–बिहानचाहिँ प्राय: भान्सामै डाडुपन्यु समातिरहेकी भेटिँदी रहिछन् यी सुन्दरी । साँझ भने त्यति सारो भ्याउँदिनन् । भ्याउनेजस्तो अवस्था आए बाहिरैबाट फोन गरेर आफ्नो भान्से ड्युटी बुक गरिहाल्दी रहिछन्– साँझको खाना म पकाउँछु है † भान्सामा काम गरिरहँदा अरू कसैले सघाउन आए आफ्नो साम्राज्य नै खोसिएजस्तो लाग्छ रे उनलाई ।
बिहान उठेर भगवान्लाई चित्त बुझाइवरी ७ बजेतिर भान्छा छिर्छिन् । आमा त्यसअघिदेखि नै भान्सामा पुगिरहेकी हुन्छिन् । चियाकफी खाने बानी छैन रे † न त ब्रेक फास्ट । बिहान पानी मात्र पिउँदी रहिछन् । आमाछोरी दुवैजना कार्यालय जानुपर्ने भएकाले ९ बजेसम्म पकाएर खाई पनि सक्छन् । सुगरिकाले सुनाइन्– ‘खाना त म मीठै पकाउँछु । आलुका परिकार र अचार झनै मीठो ।’ घरमा आमाछोरी र एक सहयोगी मात्र भएकाले छरितै रहन्छ उनीहरूको भान्सा । दालभातसँगै रोटी पनि उत्तिकै पाक्दो रहेछ । सुगरिकाको रोजाइ नै हो रोटी ।
विभिन्न वेबसाइट अनि टिभी सो हेरेर नयाँ–नयाँ परिकार बनाउन सिक्दी रहिछन् । परिकारसम्बन्धी वेबसाइट डाउनलोड गरिहाल्छिन् । यसरी सिक्दा रमाइलो लाग्ने र खानासम्बन्धी ज्ञान पनि हुने सुनाउँछिन् । सफा भान्सा आफैंमा सुन्दर हुने बताउँछिन् । भान्सामा रहँदा प्राय: सुतीका कपडा लगाउँछिन् । भन्छिन्– ‘सुतीको कपडा सुरक्षित हुन्छ ।’ टिकाउ र माझ्न सजिलो भएकाले स्टिलको भाँडा उनको प्राथमिकतामा पर्छ । थोरबहुत सेरामिक्स पनि छन् । ‘सेरामिक्सका भाँडामा तेल, बेसारको दाग देखिने र माझ्न झन्झटिलो हुन्छ’ –उनको भान्से अनुभव ।
कार्यालय जाँदा घरबाटै खाजा बनाएर लैजाँदा रहेछन् आमाछोरी । दुवैलाई बाहिरको खानामा रुचि छैन । शाकाहारी सुगरिकालाई बाहिरका खानामा उति रुचि पनि छैन । सानैदेखि घरको खाना खाएर हुर्किएकाले होला, बाहिर जाँदा खुब मिस गर्छिन् रे † जंकफुड त खाँदै खान्नन् । आफूबाहेक आमाले पकाएको खाना हो उनलाई मन पर्ने । ‘आमाले भुटेको आलु त जिब्रामा झुन्डिरहन्छ’ –प्रशंसा गरिन् । साग, कटहरको तरकारी उनका मन पर्ने परिकार हुन् । पास्ता पनि राम्रै मान्छिन् । चाइनिज फुड र हरियो खानामै बढी मन जान्छ रे † अचारचाहिँ कमै बन्छ त्यो भान्सामा, अमिलो–पिरो उतिसाह्रो मन पराउँदिनन् ।
यी कलकलाउँदी सुन्दरीले डढाएर खाना कुरूप पारेका घटना पनि कमचाहिँ रहेनछन् । आमाको हप्की खुब भेट्छिन् रे † ‘ एक दिन त प्रेसर कुकरमा विनाचामल पानी मात्र बसाइछु, सिठी लाग्यो भनेर खान ठीक पर्दा त कुकरमा पानी मात्र’ –आफ्नै बुद्धि सम्झेर खित्का छाडेर हाँसिन् उनी । त्यो घटनाले जुन काममा पनि केयरफुल हुनुपर्छ भन्ने पाठ सिकिन् अरे †
भान्से सीपमा उनकी प्रारम्भिक गुरुचाहिँ आमा नै रहिछन् । ‘आमाले पहिलो पटक आलु फ्राई गर्न सिकाउनुभएको थियो’ –उनले सुनाइन् । आफन्तको जमघटमा उनको भान्से सीपको खुब तारिफ हुन्छ रे, ‘शाकाहारी भए पनि मटन खुब मीठो पकाउँछे’ भनेर । धेरै मान्छेलाई पकाएर खुवाउँदा रमाइलो मान्ने सुगरिकाको ध्यान अरूको स्वाद अनि इच्छातिर केन्द्रित हुन्छ रे † खुला भान्साबाट वरिपरिको वातावरण नियाल्दै पकाउन पाउनाले उनलाई आनन्द दिन्छ । ‘खाना पकाएर खुवाउनु ठूलो काम पो हो त ?’ –यति भन्दै बिट मारिन् उनले ।